Izixhobo zokufumana uhlobo lohlobo obukade ulukhangela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izixhobo zokufumana uhlobo lohlobo obukade ulukhangela
Ukuba ufunda le nto kungenxa yokuba ungowakho iqela labayili ukuba ngaxa lithile ebomini babo baqalile ukubuza imibuzo malunga uhlobo lomthombo kunye nohlobo lochwethezo olusetyenziswe kwincwadana, ikhadi okanye ileyibhile.
Ukukunceda kancinci ngale nto, namhlanje siza kukubonisa izixhobo ezithile oko kuya kukunceda uqaphele iifonti ezinemifanekiso ukuze wazi ukuba loluphi uhlobo lohlobo olusebenzisayo kwaye ngenxa yoko ungashiywa ufuna ukuzisebenzisa.
Izixhobo zokufumana uhlobo lohlobo olifunayo
Njengoko kukho izicelo ezisivumelayo Chonga imibala eyahlukeneyoKukho nezixhobo ezinokusinceda ukuba sichonge ifonti.
Amaxesha amaninzi sihlala sidlulela ngaphaya kokubaluleka kokwenyani kokuchwetheza kwaye sigqibe ngokukhetha enye ukhetho olungagqibekanga, kodwa ngohlobo oluhle lokuchwetheza unokufikelela kwizinto ezintle kwaye utshintshe umbono wokuba umntu unalo uxwebhu okanye umsebenzi. Ekugqibeleni kwayo yonke into, kubaluleke kakhulu kwaye nangona umxholo ugqibelele, uyilo luya kuba nefuthe ukuba iphepha lakho liphumelele okanye ukuba intetho yakho inefuthe elihle kwabo bezayo, ke ukukhetha typography elungileyo egxininisa ubuntu bethu kunokusizisela izibonelelo ezininzi.
Kwihlabathi le-intanethi sinokufumana ezininzi amaphepha asinika iintlobo ezahlukeneyo zeefonti zasimahlaKodwa xa sifumana uhlobo lochazo kwiphephancwadi, kwifoto okanye kwelinye iphepha, akusoloko kulula ukufumanisa ukuba loluphi olusetyenzisiweyo. Njengoko sibona, ukumisela ifonti ayisiyonto ilula, ngakumbi ke ukuba singabaqalayo kwaye asazi lukhulu ngesihloko, kodwa kule meko Itekhnoloji inokusinceda kancinci.
Ngoku siza kuthetha ngefayile ye- sixhobo Yintoni iFontIs, oku simahla kwaye kusivumela ukuba sichonge iifonti ngendlela elula, konke ekufuneka sikwenzile kukuba thabatha umfanekiso wefonti esifuna ukuyifumanaEmva koko siya kulayisha lo mfanekiso kwiserver kwifomathi ye-GI, PNG okanye yeJPG kwaye emva kokuqhubekeka nomfanekiso iya kukunika iimpendulo.
Imeko kuphela abayifunayo yile umfanekiso awugqithi kwi-1,8 megabytes kwaye inzuzo kukuba sinokucoca iziphumo njengohlobo lokuhlawula simahla okanye oluhlawulelweyo.
Esinye isixhobo ngu Isazisi, kodwa oku akuchanekanga njengangaphambili, eli phepha lisebenza ngokubuza imibuzo malunga nomthombo, emva koko likunike umthombo ofana nalowo ubewukhangela. Eli phepha linemifanekiso ukuze sizikhokele kwaye sazi ukuba yeyiphi ifonti efunekayo.
Kodwa kwelinye icala kunjalo WhatTheFont, Le nkqubo inenkqubo efanayo neyokuqala, kufuneka sifake umfanekiso kwi BMP, JPEG, GIF okanye TIFF, kufuneka ungabikho ngaphezulu koonobumba abangama-25, emva koko isixhobo sihlalutya unobumba ngeleta ukubona ukuba ifonti ichanekile.
Sinokukhetha kwakhona Uhlobo lweDNA, efana naleyo yangaphambili kwaye ukhetha unobumba ngonobumba, kodwa oku kuzakusicela ukuba sikhethe unobumba ngamnye ukuze sikwazi ukubona ngokukhuselekileyo ukuba ileta ayinazinto zininzi zikhethiweyo kwaye oko kuthintela iimpazamo kwiskena.
Fumana ifonti yam sisicelo sedesktop esinokusinceda ukuba sifumane iifonti, esi sisicelo esihlawulelweyo kodwa sinokhetho lweedemo olunokusinceda sazi ukuba lusebenza njani kwaye sinokucinga ngokuthenga.
Ukuba usebenzisa iFirefox unokufumana Umfumani wamagama, Olwandiso lwebrawuza elilinganiswe kakhulu, icandelo elilungileyo lelo isinika iziphumo ngokukhawuleza kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Sinokukhetha kwakhona Yintoni iFontIs, Le yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, kuya kufuneka ufake ifoto kwi-TIF, JPG okanye kwi-PNG, kodwa ungabeka i-URL apho ubone khona ifonti ethe yakubamba.
Njengoko sele ubonile, kukho izixhobo ezahlukeneyo ezinokusinceda kakhulu xa kuziwa ekufumaneni ifonti okanye ubuchwephesha obusifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Izixhobo zokufumana uhlobo lohlobo obukade ulukhangela
Uluhlu lokugqibela lwePantone Colors 2017
Ilifu lokudala kunye nohlaziyo olutsha kwiFotohop